Published on February 28, 2013 by တိုင်းကျော်
လက်ရှိကျင်းပနေဆဲ လွှတ်တော်အသီးသီးရဲ့ ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေချိန် တရက်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အလွန် အမျက်ဒေါသ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်းတယောက် ဘယ်သူ့ကြောင့်များ ဒေါသထွက်ရသလဲ၊ ဘာအကြောင်းကြောင့်များ ဒေါသထွက်ရသလဲ။ ဒီ ပြဿနာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေသလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းမှာ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းဟာ လွှတ်တော်ကို ပုံမှန်ရောက်ရမယ့် အချိန်ထက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာပါတယ်။ ဒီအတွက် အခုလို နောက်ကျရောက်လာရတဲ့အကြောင်း ရှင်းပါတယ်။ သူက အဲဒီနေ့မှာ အစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ “နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေ” နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်တွေ လုပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီအတွက် လွှတ်တော်ထဲမှာ အချိန်ကုန်သက်သာအောင် ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတချို့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက လူတချို့နဲ့ သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပြီး သူရုံးခန်းမှာ အပြင်းအထန် ညှိနှိုင်းနေရတဲ့အတွက် အချိန်ကြာသွားကြောင်း၊ ဒါကြောင့် သူ့ကိုနားလည်ပေးပါ ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ သူက အစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ “နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းဥပဒေ”ကို ပြင်ဆင်မယ့်ကိစ္စ စပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကို ခေါ်ယူပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ထင်မှတ်မထားဘဲနဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းညွန့်က “နည်းဥပဒေ” ပြင်ဆင်မယ့် ကိစ္စ ဆွေးနွေးတာကို ရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ အဆိုတင်သွင်းလိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးသိန်းညွန့်တင်ပြတာက လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီးတဲ့ ဥပဒေတရပ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့က “နည်းဥပဒေ” ထုတ်ပြန်နိုင်ကြောင်း၊ ဒီ ထုတ်ပြန်တဲ့ နည်းဥပဒေပါ အချက်တရပ်ရပ် ဒါမှမဟုတ် အချက်တချို့ဟာ မူလဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေရင် အခြခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃၇ (ခ) အရ ပယ်ဖျက်ရန်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ လွှတ်တော်ကော်မတီက ဖြန့်ဝေထားတဲ့ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်မယ့် အချက် ၆၃ ချက်ဟာ မူလဥပဒေပါ ဘယ်အချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိဘူး ဆိုတာ ဖော်ပြမထားကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် အဲဒီ အချက် ၆၃ ချက်မှာ အသစ် ဖြည့်စွက်တာတွေ ပါဝင်နေပြီး ဒီလို ဖြည့်စွက်ဖို့ အခြေခံဥပဒေက ခွင့်ပြုမထားကြောင်း၊ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်မှုတွေမှာလည်း မူလဥပေဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတာတွေပါကြောင်း ဥပမာတွေနဲ့တကွ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်မက ဦးသိန်းညွန့်က စီးပွားရေးသမားတချို့ဟာ သူတို့အကျိုးစီးပွား အမြင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ မူလဥပဒေကို ပြင်ဆင်ကန့်ကွက်တာတွေ လုပ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ လွှတ်တော်အနေနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ချဲ့ယူနေတာဖြစ်လို့ နောင် အစဉ်အလာ မကောင်းဖြစ်သွားမယ်၊ ဒါကြောင့် သူရဦးရွှေမန်း ရုံးခန်းထဲမှာ ညှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အမြင်တွေ ရယူဖို့ ဆွေးနွေးတာတွေ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ တင်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသိန်းညွန့် ဒီလို ပြောလိုက်တာဟာ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ အရှိုက်ကို ထိုးနှက်လိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီး အလွန်ဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီတာ၊ မညီတာ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေနဲ့ ဆိုင်တယ်။ သူကတော့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒီနည်းဥပဒေကိစ္စ အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ညှိထားလို့ အခုလို ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ တင်ပြတာကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး လွှတ်တော် သဘောတောင်မယူဘဲ ယတိပြတ် ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် နည်းဥပဒေ ပြင်ဆင်တာတွေ ဆက်လုပ်ပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်းက ဒီလောက်နဲ့ မကျေနပ်နိုင်သေးပါဘူး။ လွှတ်တော် နားပြီး နောက်တချိန် ပြန်စတော့လည်း ဦးသိန်းညွန့်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ဒီကိစ္စ ထပ်ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေ ပြင်ဆင်တာကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီတယ်၊ မညီဘူးဆိုတာ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ခုံရုံး” နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ် ဆိုတာလောက် ပြောပြီး ဦးသိန်းညွန့်က တင်ပြချင်ရင် ခုံရုံးကို သူတင်ပြပေးမယ်လို့တော့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကို ပြဿနာတွေ တင်ပြနိုင်တာ သမ္မတ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ၂ ယောက်၊ တရားသူကြီးချုပ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ စုစုပေါင်း ၅ ယောက်ကပဲ တင်ပြပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ဦးသိန်းညွန့် အနေနဲ့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်း ပေါက်ပါတယ်။ ဒီအတွက် လက်ရှိ အတည်ပြုနေတဲ့ နည်းဥပဒေကို ဦးသိန်းညွန့်အနေနဲ့ ထကန့်ကွက်ရင် လွှတ်တော်အမတ် ဂုဏ်သိက္ခာ မထိခိုက်ရအောင် သတိပေးရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြီး မဆီမဆိုင် ဒေါနဲ့မောနဲ့ တုံးကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ထုလိုက်ပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ပြဿနာ ဆိုတာ လွှတ်တော်ထဲက ခရိုနီတွေ၊ ခရိုနီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနည်းတူ ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပေးချင်တဲ့ သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့တွေကြားက အားပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အားပြိုင်မှုကြားမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ညှိပြီးလုပ်ရင်ရတယ် ဆိုတဲ့ သူရဦးရွှေမန်းကို ခရိုနီတွေ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဥပဒေ အထက်ရောက်နေတဲ့သဘော ပြောဆိုမိခဲ့တာကြောင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဒေါသ အလွန်ထွက်ခဲ့ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/28/20130အကြံပြုခြင်း
မအူပင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လယ်သမားနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ် ရုပ်သံမှတ်တမ်းတို
NDF ဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွှေဆိုင်းက ပြည်ထောင်စုသမိုင်းမှာ ဗမာမဟုတ်တဲ့
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ စုစည်းပြီး မိမိတို့ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ
ကို မိမိတို့စ်ိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ဖို့ ဆိုပြီးမိန့်ခွန်းပြောဖူးတယ်...
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ မြန်မာကNLDလိုပါတီNDP(New Democratic party)
အပေါ်မှာဖေါ်ပြခဲ့သလို ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစုစည်းပြီး
မိမိတို့ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို မိမိတို့စ်ိတ်တိုင်းကျ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို မိမိတို့စ်ိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲပြဌာန်းရာမှာ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/27/20130အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/27/2013 1 အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/26/20130အကြံပြုခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကိုရာက်ရှိနေတဲ့ တောင်အာဖရိက ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒတ်စမွန်တူးတူးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာ ဒီကနေ့ညနေ ၃ နာရီအချိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီး ဒတ်စမွန်တူးတူးဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က နိုင်ငံတကာလှည့်လည် ပညာရှာမှီးရေးအစီအစဉ်နဲ့ ပင်လယ်ရေကြောင်း ကမ္ဘာပတ်နေသော Semester at Sea သင်္ဘောနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာပြီး သူဟာ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်က ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်ကူး - ကိုခန့်၊ ကျော်ဇေယျာဝင်းDVB TV News
မလက်တိုကျေးရွာတွင် သေနတ်ဖြင့် အချက်(၁၅၀)ခန့် ပစ်ခက်ခဲ့ရာ လယ်သမား(၈)ဦးကျည်ဆံထိမှန်
မအူပင်မြို့နယ်၊ မလက်တိုကျေးရွာတွင် ဒေသခံလယ်သမားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့
မအူပင်မြို့နယ်၊ မလက်တိုကျေးရွာတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ဒေသခံလယ်သမားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား သိမ်းယူခံခဲ့ရသော လယ်မြေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ကနဦးရရှိသော သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မလက်တိုကျေးရွာအတွင်း သိမ်းယူခံထားရသော လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော လယ်များအတွက် ရေအလုံလောက်စွာ ရရှိရေးအတွက် ဒေသခံလယ်သမားများက လွန်ခဲ့သည့် ၇ ရက်ခန့်ကတည်းက တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ ရန်ကုန်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား ၂၀၀ ခန့်နှင့် မအူပင်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား ၁၀၀ ခန့် လာရောက် စောင့်ကြပ်လျက်ရှိပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် လာရောက်ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသခံလယ်သမားများအကြား ပဋိပက္ခများ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သဖြင့် မွန်းလွဲ ၁ နာရီချိန်မှစ၍ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရကာ ညနေ ၆ နာရီအချိန်တွင် သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုသို့ ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား ၂၀ ကျော်နှင့် ဒေသခံ ရွာသူရွာသား ၇ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး မအူပင်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ''ဆေးရုံကို လူနာတင်ယာဉ်တွေနဲ့လာတာ ၇ ခေါက်လောက်ရှိပါပြီ၊ ဒေသခံ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကတော့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တစ်ဦးက ကျည်ဆံဖောက်ဝင်သွားတယ်လို့ သိရတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးကိုလည်း အရေးပေါ်အခန်းမှာ ကုသနေတယ်လို့ သိရပါတယ်'' ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊မအူပင်ခရိုင်၊ မအူပင်မြို့နယ်၊မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ပလောင်ကျေးရွာမှ ရွာခံလူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မအူပင်မြို့မှ (၁၂)မိုင်ဝေးသည့် ပလောင်ရွာတွင် လယ်သမားများ၏ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကိုရဲများကတားဆီးရာမှ အရပ်သား(၁၁) ယောက်နှင့်ရဲ (၂၉)ယောက် ဒါဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရှိပြီး မအူပင်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ထားရကြောင်း မအူပင်ဆေးရုံမှ သတင်းရရှိသည်။
မလက်တို ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ ရွာ(၆)ရွာမှ လယ်သမားများသည် သူတို့၏လယ်ဧက(၁၀၀၀)ကို၂၀၀၄ခုနှစ်ကတည်းက လျော်ကြေးမရပဲ သိမ်းခံထားခဲ့ရ၍ လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သည်မှာယနေ့(၆)ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ကြောင်း၊ ညနေ(၂း၀၀)နာရီတွင် ရဲဌာနမှ ပုဒ်မ(၁၄၄) ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပြီး ညနေ(၅း၀၀)နာရီခန့်တွင် ရဲအင်အား(၃၀၀)ခန့်ဖြင့် စတင်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
"အရပ်သားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုနိုင်ဝင်းကတော့ နောက်ကျောမှာ သေနတ်ဒါဏ်ရာ ရထားတယ်၊ ဦးခေါင်းကိုလည်းရိုက်ခံထားရတယ်၊ လက်မောင်းမှာလည်း သေနတ်ဒါဏ်ရာ ရထားလို့ ဒါဏ်ရာပြင်းထန်ပြီး မအူပင်ဆေးရုံကိုပို့ထား ရပါတယ်။အခြားဒါဏ်ရာရတဲ့ ရွာသားတွေလည်း ကြောက်ပြီးပုန်းနေကြတယ်။ အခုအဲဒီလို ဒါဏ်ရာ ပြင်းထန်ရပြီး ပုန်းနေတဲ့ရွာသားတွေကို ကူညီ ကုသပေးဖို့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေ လိုက်ရှာနေကြပါတယ် ” ဟု ပျိုးခင်းသစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကိုထိုက်ထိုက်က ပြောကြားသည်။
ယခုသိမ်းဆည်းခံထားရသော လယ်မြေဧက(၁၀၀၀)ကို ဒေါက်တာမြင့်စိန်ဆိုသူက ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိကာ ဧက(၅၅၀) ကို ငါးကန်များတူးထားပြီး၊ ကျန်ဧက(၄၅၀)ကို သီးစားချပေးထားကြောင်း ကိုလယ်(၁၅)ဧကသိမ်းခံထားရသည့် ပလောင်ရွာသား ကိုငြိမ်းမောင်ကပြောပြခဲ့ပါသည်။ ______________________
Ref: Myanmar Age News Journal
မအူပင် အဓိရုန်း ရဲ ၂၅ ဦးဒဏ်ရာရ လယ်သမား ၆ ဦးသေ
ကိုမင်းဇော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်ရုံး အဖွဲ့ဝင် ) တယ်လီဖုန်းနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုချက်
နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်မှာ ကျနော့်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တယ် မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု ပလောင်ကျေးရွာကိုသွားတယ် ။ အဲဒီမှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားတယ် ကျနော်ရောက်တဲ့အချိန်က ၂ နာရီလောက်ရှိပြီ ။ ရဲချုပ်နဲ့ စစ်တိုင်းမှူးကို ၁၄၄ ရပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံတယ် ။ ကျနော်ကြားဝင်ပြီးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ် ။ တောင်သူတွေက လက်ခံပါတယ် ။ ပြည်သူတွေထဲက လေးယောက် ကျနော်အပါအ၀င် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တိုင်းဒေသ ၀န်ကြီး ရာယ်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ ပြေလည်တယ် ။ တောင်သူတွေက သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာတွေကိ လယ်ပြန်စိုက်ချင်တယ် ။ တောင်းဆိုတာကို စာနဲ့တောင်းဆိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ် ။ အဲဒါနဲ့ပြေလည် သွား တယ် ။ ကျနော်က ရဲတွေတားထားတဲ့ခြံစည်းရိုးထဲကနေ သွားပြီး ပြည်သူ တွေကြားထဲမှာငြိတယ် ။ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ ပြန်တောင်း ဆိုမယ် စာတင်မယ် ။ လို့ပြောတဲ့ အခါ တောင်သူအများစုကလက်ခံတယ် ။ အဲဒီအချိန်မျာ ကိုမောင်စိုးဆိုသူက ((( နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရင် ဘယ်လို လုပ် မလဲ ပြည်သူတွေအာဏာပိုင် ကိုမယုံနဲ့ ))) လို့ထပြောတယ် ။ ကျနော် ဥပဒေအတိုင်းမှမဆောင်ရွက်ရင် အသက်ဆုံးရှုံးမယ် ကိုယ်လိုချင်တာ ကိုမရ ဘူး ဖြစ်မယ် အဲလိုပြောတော့ မောင်စိုးက ((( အခုချက်ခြင်း မရရင် ကျနော်တို့က မယုံဘူး )))လို့ပြောတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ငြိနှိုင်းပေးလို့မှမရရင် ကျနော်ပြန်မယ် ။ ကျနော်လည်းပြန်လို့ ရဲတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ခြံစည်းရိုး အတား အဆီးအပြင်ကို ကျနော်ရောက်တာနဲ့ ( ၅ - ၄၄ ) အတိ စပြီး - ရဲတွေက ဒိုင်းတွေ သူတို့မှာပါလာတဲ့ တုတ်တွေနဲ့ ညာသံပေးပြီးရိုက်တယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ရဲတွေကို ရွာသားတွေက ၀င်ရိုက်တယ် ။ တုတ်တွေကော ဓါးတွေကောတွေ့တယ် ။ ရွာသားအင်အား ၂၀၀ ခန့်လောက်ရှိလိမ့်မယ် ။ ရဲအင်အားကတော့ ၂၀၀ ကျော်လောက်ရှိတယ် ။ ရိုက်နှက်တဲ့ အချိန် ၁၅ မိနစ်လောက်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်နေပါတယ် ။ ပထမ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် ဖြစ်ပြီး ၅ မိနစ်လောက်မျာ သေနတ်သံတွေကြား ရပါတယ် ။ သေနတ်သံ ဆယ့်လေးငါးချက်လောက်တော့ကြားတယ် ။ ကျနော် တို့လည်း အခင်းဖြစ်တဲ့ချောင်းရဲ့ တစ်ဘက်ကမ်းကို ထွက်ပြေး ခဲ့တယ် ။ NLD လူငယ် ကျနော်အပါအ၀င် လေးငါးဆယ်ဦး လောက်ရှိတယ် ။ ကျနော်တို့ ဟိုဘက်ကမ်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဘဲ ရဲလူနာတွေသယ်ထုတ်လာတာတွေ့ရတယ် - ကျနော်ပြန်တဲ့အချိန်အထိကို ၂၅ ဦးဒဏ်ရာရနေပြီ ။ ပထမဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့ရဲက စောင်ပုခက်နဲ့သယ်လာ တာ မျက်နှာမှာသွေးသံရဲရဲတွေ့တယ် ။ အခုဆို လယ်သမား ၆ ဦးသေတယ်လို့သတင်းရနေပါပြီ ။
လယ်ယာမြေပြန်လည်ရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသော မအူပင်မြို့နယ်မှ လယ်သမားများအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ သေနပ်ဖြင့်ပစ်ခက်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ၂၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု ပလောင်းကျေးရွာအပိုင် ကွင်းအမှတ်(၉၆၉)အတွင်း လယ်သမားများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်စားသောက်လာသော ဘိုဘွားပိုင်လယ်ယာမြေ ဧက(၁၀၀၀)ခန့်ကို အောချက် ကုမ္မဏီပိုင်ရှင် ဒေါက်တာမြင့်စိန်မှ သိမ်းယူထားသည့်အတွက် ဒေသခံလယ်သမား(၅၀၀)ကျော်တို့သည် မိမိတိုလယ်ယာမြေများပြန်လည်ရရှိရေးကို ယနေ့အချိန်ထိ စုရုံးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ မအူပင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ယနေ့ နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထားပြီး လူစုခွဲရန် ပုဒ်မ ၁၄၄အမိန်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူစုမခွဲပါက သေနပ်ဖြစ်ပစ်ခက် လူစုခွဲမည်ဟု ဓါတ်စက်ဖြင့်ကြေငြာနေခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအနေထားတွင် လယ်သမား(၅၀၀)ကျော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်းအား (၃၀၀)ကျော်တို့ အပြန်အလှန်တင်မာမှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြသည်။ လယ်သမားများအနေဖြစ်လည်း မိမိတို့လယ်ယာမြေပြန်လည်ရရှိရေးကို အသက်ပေး၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယနေ့ည ၇း၀၀ နာရီခန့်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ လယ်သမားများလူစုမကွဲသောကြောင့် သေနပ်ဖြင့် အချက်(၁၅၀)ခန့် ပစ်ခက်ခဲ့ရာ လယ်သမား(၈)ဦး သေနပ်ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး အတွင်းလူနာအဖြစ် မအူပင်ဆေးရုံတွင်တင်ထားရသည်။ လယ်ယာမြေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသော လယ်သမားများမှ ယခုအချိန်ထိ ဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အကြောင်းစုံကို ဆက်လက်ရှိချင် စုံစမ်းလိုပါက ၀၉ ၄၂၀၁၈၀၃၆၆ ဒေါ်ဝင်းချိုသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/26/20134အကြံပြုခြင်း
( ၂၁.၀၂.၂၀၁၃ ) နေ့ဒိန်းမတ် ၌ ရခိုင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ( peace ) အကြောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
ရိုဟင်ဂျာလို့ခံယူထားသူ ( ဘန်ကာလီ ) တဦး မှ မေး....
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/24/20130အကြံပြုခြင်း
Miss Myanmar International 2013 ပြိုင်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ညပိုင်းက မရမ်းကုန်းမြို့နယ် MCC ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများ။
နိုင်ငံသားဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဟာ မိမိနိုင်ငံကပဲ ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
နိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပေး ပြောကြားချက်တွေကို ဂရုတစိုက်လေ့လာပြီး မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနားက ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးဖို့ မနေ့ကကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး မစတင်ခင်မှာ သတင်းထောက်တွေက မေးမြန်းခဲ့တာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
"အဲဒါလည်း သူဘယ်လို ပြင်သင့်တယ်ဆိုတာကို သူ့ပြောချက်တွေကို သုံးသပ်ရမှာပေါ့၊ ဒီလို နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ ပညာရှင်တွေ ပြောတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာ နားထောင်သင့်တယ်၊ လေ့လာသင့်တယ်၊ သုံးသပ်သင့်တယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ ဆီလျော်သည် မဆီလျော်သည်ဆိုတာကတော့ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့"
တဆက်တည်းမှာပဲ အဲဒီလိုပြသနာတွေကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရာမှာ နိုင်ငံတကာက ချမှတ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဆင့်ကိုမီဖို့တော့ လိုအပ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နောနော်ရဲ့ မလှည့်စားနဲ့ကို အမေရိကန်ကမြန်မာလိုသီဆို
နောနော်ရဲ့ မလှည့်စားနဲ့သီချင်းကို အမေရိကန်တယောက် ကမြန်မာလို ပီပီသသ နဲ့တော်တော်ကောင်းအောင် သီဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစကားကိုလေ့လာနေတဲ့ လူတယောက်လို့သိရပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေလို
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ တနေ့တာ
by Soe Tun on Tuesday, February 19, 2013 at 10:53pm ·
ကျွန်တော် လေ့လာရသလောက်တော့ တနေ့ကို အယောက် ၂၀၀ ကျော်ကျော်လောက်အတွက် မနက် ၉-နာရီကနေ စတင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး မိမိ ရယူထားတဲ့ တိုကင်နံပါတ်ပေါ် မူတည်ကာ မနက် ၉-နာရီကနေ ၁၂-နာရီအတွင်း ချိန်ကိုက် သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မသိခဲ့လို့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မနက် ၉-နာရီ အရောက်သွားခဲ့တာကြောင့် တိုကင်နံပါတ် ၂၀၀ ကျော်ကို တော်တော်ကြာအောင် စောင့်လိုက်ရတယ်။ အချိန်ကို တွက်ချက်ပြီး သွားရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် တန်းစီစရာ မလိုသလို အခွန်ဆောင်ဖို့ တွက်ချက်တာကိုလည်း အချိန်ပေး စောင့်စရာ မလိုပါဘူး။ မိမိ နံပါတ်ကျော်သွားရင်လည်း ပြန်ခေါ်ပေးပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ရောက်ရောက်ချင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ယူဆောင်လာတဲ့ စာရွက်စာတန်းတွေ ပြင်ဆင်ပြီး တန်းစီရပါတယ်။ မိမိ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အလှည့်ရောက်ရင် စာရေးတစ်ယောက်ယောက်က ယူလာတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ စုံမစုံ စစ်ဆေးပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Service Fee ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးဆောင်ပြီးရင် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရပါတယ်။
ဘာအတွက်ကြောင့် Service Fee တောင်းသလဲဆိုတာ နားမလည်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံက မများပေမယ့် အဲ့လို အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ ကောက်ခံခြင်းမျိုးကတော့ မရှိသင့်တော့တာ အမှန်ပါပဲ။ ဓါတ်ပုံဖိုးဆိုရင်လည်း ထိုက်သင့်ငွေကို တရားဝင် ကြေညာပြီး ပေးဆောင်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတဲ့နောက် အခွန် ဘယ်လောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ သိရှိဖို့ ကြိုတင်ယူထားတဲ့ တိုကင်နံပါတ်အတိုင်း စောင့်ရပါတယ်။ တိုကင်နံပါတ်ပေါ် မူတည်ပြီး အနီးအနားမှာ သွားရောက် စားသောက်တာ၊ လျှောက်ကြည့်တာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိအလှည့်ရောက်ရင် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်က အခွန် ဘယ်လောက် ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ တွက်ချက် ပြောပြပြီး နေ့လယ် ၃-နာရီမှာ အခွန်လာဆောင်ဖို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ အခွန်ငွေ တွက်ချက်ပေးခြင်းကို နေ့လယ် ၁-နာရီ မထိုးခင်မှာ ပြီးစီးသွားတဲ့အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် နေ့စဉ် နေ့လည် ၁-နာရီအတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးပတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
နေ့လည် ၃-နာရီမှာ စတင် စောင့်နေရပြီး အခွန်ဆောင်လို့ ပြီးသွားရင် ညနေ ၅-နာရီမှာ ပိုက်ဆံ ၁၅၀ နဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လာထုတ်ဖို့ တခါ ပြန်လာ စောင့်ရပါတယ်။
*** ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ တန်းစီတဲ့အခါ အရင်ရောက်ရင် အရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ရပေမယ့် အခွန်ဆောင်ဖို့ ကျသင့်ငွေကို သိရှိဖို့အတွက်တော့ မိမိယူထားတဲ့ တိုကင်နံပါတ်အတိုင်း စောင့်ရကာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ယူချိန်မှာတော့ တိုကင်နံပါတ်အတိုင်း မခေါ်ပဲ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အရင်ပြီးတဲ့အတိုင်း ခေါ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒါကတော့ တနေ့တာ သံရုံးမှာ အချိန်ပေး လုပ်ဆောင်ရမယ့် အစီအစဉ်ပါပဲ။
သံရုံးမှ မိမိအလှည့်အား စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်နှင့် မပျင်းရိရစေရန်
များကြောင့် အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့လှသလို စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
ဖန်သားပြင်မှာ သတင်းအချက်အလက်တွေ စာတန်းထိုးတဲ့အခါမှာ စာလုံးပေါင်း တချို့မှားနေခြင်းနဲ့ စကားစု အဖြတ်အတောက် မမှန်ကန်ခြင်း စတဲ့အသေးအဖွဲလေးကို ပြင်လိုက်ရင်တော့ မြန်မာသံရုံးအနေနဲ့ ပိုမို ပြည့်စုံသွားမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့မှာ အခွန်ဆောင်သူ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်လဲသူ အချို့ရဲ့ မသင့်တော်သော လုပ်ရပ်တချို့ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဥပမာ …
၃။ တစ်သျှူးများ အပါအ၀င် အမှိုက်သရိုက်များကို အမှိုက်ပုံးထဲ မထည့်ပဲ ထိုင်ခုံအောက်ကို အလွယ်တကူ ပစ်ချထားခြင်း
(ထိုင်ခုံအားလုံးဟာ အမိုးအကာအောက်မှာ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့စွာ ရှိနေတာမို့ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ထိုင်ခုံမှာ ခင်းထိုင်သည်ကို နားမလည်ပါ။)
အစရှိတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ သာမန်အားဖြင့် ကြည့်ရင် ဘာမှ မဟုတ်ပေမယ့် နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘယ်လောက် စည်းကမ်းရှိတယ်။ နိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လောက် ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားသလဲဆိုတာကို တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာတော့ အင်မတန် တာသွားပါတယ်။
နိဂုံးချုပ် ပြောရရင် ယခုလို အစစ အရာရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာ၊ နိုင်ငံသားတိုင်းလည်း မိမိတို့နိုင်ငံ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ လိုလားတောင့်တနေကြတဲ့အချိန်မှာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသေးအဖွဲကအစ မိမိတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အရာတိုင်းကို တာဝန်သိသိနဲ့ လုပ်ဆောင်ကြပါ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ အပြုအမှု အပြောအဆို စတာတွေကို ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားတဲ့သူဖြစ်အောင် ပြုပြင်ကြပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် မိမိအသိုင်းအ၀ိုင်းက မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများကိုလည်း အားပေးတိုက်တွန်းကြပါလို့ လေးစားစွာ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
20 Feb 2012 (2:00AM)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/24/2013 1 အကြံပြုခြင်း
ချင်းအမျိုးသားနေ့ အမေစု မိန့်ခွန်း
ဦးသန်းဝင်းမှ7မှတ်။မစန်းလှမှ113 မှတ်ရရှိ
နိုင်ငံတော်ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် ဒေါ်စုမှဦးဆောင်ပြီး 27.2 ရက်
ဦးသန်းဇော်မြင့်တို့ မှ အကာအကွယ်ပေးနေမှုများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ
ရုံးဝန်ထမ်းမစန်းလှအား မတရား မယူမနေရပင်စင်ပေးခြင်းအပေါ်ပြန်လည်
စုံစမ်းစစ်ဆေးရာ တရားခွင်တွင်ဦးသန်းဝင်းမှ7မှတ်။မစန်းလှမှ113 မှတ်ရရှိခဲ့
ပြီး မစန်းလှမှအနိုင်ရခဲ့သော်လည်းနောက်တစ်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမှ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/24/20132အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်လာသန်းချီ အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဘာကြောင့် အရေးယူမခံရတာလဲ ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေ ရှိနေတာလဲ သိရှိနိုင်ရန် ပေးပို့ အပ်ပါသည်။
“ဘကြီး နေကောင်းလား . ဘာတွေဖတ်နေတာတုန်း” လို့ မေးရာ
“အေး. အတော်ပဲကွာ. ဘကြီးလည်း တူမောင်ကို မေးချင်. သိချင်တာလေးတွေ ရှိနေတာနဲ့ အတော်ပဲ” ဟု ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်.
“ဘာတွေ သိချင်နေတာလဲ ဘကြီးရ” ဟု တူမောင်က ပြောရာ ကျွန်တော်လည်း .
“ဟို တလောကကွာ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဘကြီးဖတ်လိုက်ရတယ်။ တူမောင်တို့ ဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းနဲ့ အထွေထွေမန်နေဂျာ/အင်ဂျင်နီယာချုပ်စတဲ့ အရာရှိကြီး(၈)ဦးကို မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းနဲ့ အဆောက်အဦ စရိတ်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ တင်ပြတောင်းခံရာမှာ ပိုမိုတွက်ချက်တင်ပြပြီး ထုတ်ယူတာကြောင့်ရယ်၊ စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ယူရာမှာလည်း ဈေးလျော့ဝယ်ယူတာတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံပိုင်ငွေတွေကို ထုတ်ယူအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်မှု ပအမှတ် ၆/၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၄၀၉ နဲ့ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်က ဘုရားကုန်းရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်အရေးယူတော့မယ်လို့ ဘကြီးဖတ်လိုက်ရတယ်ကွ၊ ဒါပေမယ့် အခုချိန်ထိ အဲဒီအကြောင်း ဘာမှထပ်မကြားတော့လို့ ပြီးများသွားပြီလား၊ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့ သိချင်နေတာ ကွ တူမောင်ရ”
ဟု ပြောလိုက်ရာ ကျွန်တော့တူတော်မောင်က ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး ဒါက ဒီလိုရှိတယ် ဘကြီးရဟုဆိုကာ သူတို့ဝန်ကြီးဌာနက သတင်းတွေအားလုံးကို ပြောပြပါတော့တယ်.
“ဘကြီးပြောတဲ့ ပထမသတင်းက မှန်တယ်ဘကြီးရ. အမှုလည်းဖွင့်ပြီး နောက်နေ့မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနကို စသုံးလုံးကလူတွေရောက်လာပြီး လူကြီးပိုင်းတွေကို စပြီးစစ်တော့တာပဲ. သူတို့ရုံးခန်း တွေထဲက ကွန်ပျူတာတွေ၊ ဖိုင်တွေ၊ ဖုန်းတွေ အားလုံးကို သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး အကုန်စစ်တော့တာပဲ ဘကြီးရ.” ဟု ဆိုကာ ဆက်ပြောပါတယ်.
“နောက်ပြီး စစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ဝန်ကြီးဆီကို ဦးသိန်းဝင်းက ငွေလွှဲပေးတဲ့ပြေစာတွေ အင်တာနက် ပေါ်ရောက်လာတော့ ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ ဘကြီးရာ. စစ်စစ်ချင်း အစောပိုင်းမှာတင် စာရင်းကွာတာ တွေ၊ ငွေကွာတာတွေ၊ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းကွာတာတွေ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေတင်သွင်းဝယ်ယူတဲ့ နေရာမှာ နိုင်ငံတော်ကိုတန်ဖိုးများများစာရင်းပြ ကုမ္ပဏီနဲ့ညှိပြီး အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေ သွင်းတာတွေ တွေ့တာပေါ့ဘကြီးရာ. ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီတစ်ခါတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး တကယ်အရေးယူပြီလို့ ထင်တာပေါ့ဘကြီးရာ. အခုကြတော့ အဲဒီလို မဟုတ်တော့ပြန်ဘူး ဘကြီးရ.” ဟု ပြောတော့
ကျွန်တော်လည်း အတော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီး “ဟေ ဟုတ်လား ဘကြီးသိချင်နေတာ အဲဒါကွ. ဆက်ပြောပါအုံး” ဟု ပြောလိုက်ပါရာ
“စစချင်းတော့ သူတို့ပဲပေါ. နောက်တော့မှ ဘကြီးရေ- စစ်လိုက်တာ တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ပါ ဆိုသလိုပေါ့. အခုလိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေက အခုဒီဝန်ကြီးလက်ထက်ကြမှ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး၊ အရင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဇော်လက်ထက်ကတည်းက ဖြစ်နေတာ ဘကြီးရ၊ ဇာတ်လမ်းက အရှုပ်ကြီးရယ်၊ စာရင်းဇယားတွေ အကုန်လုံးကို စစ်တာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အပြင်ကကုမ္ပဏီတွေလည်း ပါတာပေါ့ ဘကြီးရာ၊ အဲဒီထဲမှာ ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ Project တွေ အများဆုံးရတဲ့ ကုမ္ပဏီက RedLink ကုမ္ပဏီလေ.”
“RedLink ကုမ္ပဏီကို ဘကြီးသိလား” လို့ တူတော်မောင်က စကားဖြတ်ပြီးမေးလိုက်ရာ
”အင်း မြင်တော့ မြင်ဘူးတယ်. ကြေငြာတွေထဲမှာ တွေ့တာလေ” ဟု ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်. ဒါနဲ့ တူတော်မောင်က .
“အဲဒီကုမ္ပဏီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီး ဦးရွှေမန်းရဲ့သား တိုးနိုင်မန်းပိုင်တာ ဘကြီးရ၊ ဒါကြောင့်မို့ ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ Project တွေ အများကြီးကို သူတို့ရတာပေါ့. အခုဒီမှာ ပြဿနာလည်းဖြစ်ရော ဟို.စသုံးလုံးအဖွဲ့တွေက သူတို့ကိုပါခေါ်ပြီးစစ်တာပေါ့. အဲဒါ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ RedLink နဲ့ပေါင်းပြီး စာရင်းလိမ်ပြထားတာတွေ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စတွေ၊ အခွန်ရှောင်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီး အများကြီး ပေါ်လာတာပေါ့ဘကြီးရာ. ဇာတ်လမ်းက အဲဒီမှာ စတာ ဘကြီးရ. ဝန်ကြီးနဲ့ အစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ လူကြီးတွေကလည်း သူတို့ကို ဖော်ထုတ်ရင်. သူတို့ကလည်း အရင် ဝန်ကြီးဟောင်းတွေ၊ လက်ရှိဝန်ကြီးတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတွေရဲ့ လာဘ်စားထားတဲ့အကြောင်း တွေ၊ သူတို့ကို ခွဲဝေပေးရတဲ့အကြောင်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားသမီး.တွေကို လုပ်ကိုင်ခွင့် Project တွေ ပေးရတဲ့အကြောင်းတွေကို ဖော်ကောင်လုပ်မှာလို့ ပြောလိုက်တယ်. အခုကျွန်တော် နောက်ဆုံး သိရတာကတော့ သူတို့ကိုသာ အရေးယူမယ်ဆိုရင် သူတို့ဖော်ကောင်လုပ်မယ့် အချက်အလက်တွေကို ပြုစုပြီးပြီလို့ သိရတယ်ဘကြီးရ. အဓိကကတော့ RedLink ကုမ္ပဏီနဲ့ ပေါင်းပြီး နိုင်ငံတော်ကို ညာထားတဲ့အချက်တွေပေါ့ ဘကြီးရာ. အဲဒီကုမ္ပဏီက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီး ဦးရွှေမန်းရဲ့သား ပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်နေတော့ သူပါ သိက္ခာကျ၊ အရှက်ကွဲရမယ့် အခြေအနေလေ. ဒါကြောင့်မို့ အခုတော့ ဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းနဲ့ အဖွဲ့ အရေးယူမခံရဘဲ ရှိနေတာကို လွှတ်တော်ကလည်း ဘာမှမပြောရဲ၊ မလုပ်ရဲ မကိုင်ရဲဖြစ်နေတာပေါ့ ဘကြီးရ”လို့ ပြောလိုက်တော့မှ ကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်ပါတော့တယ်။
မလက်တိုကျေးရွာတွင် သေနတ်ဖြင့် အချက်(၁၅၀)ခန့် ပစ်ခက...
နိုင်ငံသားဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဟာ မိမိနိုင်ငံကပဲ ဆုံးဖြတ...